Banyere Anyị - Chengdu Zhihongda Nonwoven Bag Co., Ltd.
Chengdu zhihongda nonwoven bag Co., Ltd. guzobere na 2013, emi odude ke Chengdu, Southwest China, tumadi aku na-abụghị kpara akpa, owu akpa, kwaaji akpa, polyester akpa, foldable akpa, laminated akpa, drawstring akpa, oyi akpa, akpa uwe, ngwaahịa ndị ọzọ na-abụghị kpara na ngwaahịa eco. Ọ bụ a mmepụta enterprise tụnyere imewe, R & D, akpa mmepụta na ọrụ, na-enye integrated Eco akpa ngwọta.
Anyị nwere ihe karịrị afọ 10 nke ọkachamara ahụmahụ Eco-akpa mmepụta. Anyị na-enye Eco-akpa na mpaghara ahịa na mbupụ ka oversea ahịa, dị ka Europe, America, Canada, Australia, Japan, Singapore, wdg, Anyị bụ ndị a ọkachamara otu maka gị OEM ODM iwu. N'ihi na OEM iwu, anyị nwere ike inyere-eme ka niile mmepụta Filiks, si echiche ka ikpeazụ ngwaahịa, were were; maka iwu ODM, enwere ọtụtụ nhọrọ maka gị.
Akpa anyị bụ enyi na enyi na-adịgide adịgide, ọ bụ ezigbo usoro mgbasa ozi n'okporo ámá. A pụrụ iche imewe akpa ga-ewetara gị enweghi ngwụcha uru site na nkwalite na ika oruru, ọ mgbe niile na-ewusi gị ika’s image mgbe eji. Companylọ ọrụ anyị na-ekwusi ike iji usoro obibi obibi na gburugburu ebe obibi na akwa na akwa na-adịgide adịgide maka akpa anyị.
CHENGDU ZHIHONGDA bụ TOP ONE na ụlọ ọrụ eco-bag. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inye mma akpa ka mma na ezi uche price maka dị iche iche ahịa gburugburu ụwa. anyị ozi bụ inyere ndị ahịa anyị guzosie ike a ọma ika oyiyi na-echebe gburugburu ebe obibi. Ọ ga-amasị anyị ịnakwere mkpa na echiche dị iche iche nke ndị ahịa anyị, iji nọgide na-emepe akpa eco maka ndị ahịa anyị. Anyị na-enye ọrụ ndị ahịa maka ndị ahịa anyị iji chekwaa oge na ego ha bara uru.
Chengdu zhihongda nwere zuru eco akpa Ndinam akụrụngwa, a na-achụ ọgụgụ isi akpaka mmepụta mode na ụfọdụ nanị ntuziaka ịkwa akwa. Ọ gafeela igwe igwe eji agba agba itoolu, igwe eji arụ ọrụ, ụdị igwe ịkwa akwa dị iche iche, ihe dịka ndị ọrụ ntinye akwụkwọ silk 106 na ndị ọrụ ịkwa akwa.
Ndị ahịa anyị maara nke ọma mkpa ndị ahịa ahaziri iche nke ndị ahịa anyị, dị ka nha akpa eco, logo & mbipụta akwụkwọ, nhọrọ akwa, Nhazi usoro, na ihe ndị ọzọ. Anyị na ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ iji mee ike anyị niile. Oge nnyefe ahụ dị anyị ezigbo mkpa, n'ihi na anyị agaghị echefu ụbọchị ndị ahịa anyị. Ọ bụrụ na enwere ọnọdụ mberede na mmepụta, anyị ga-agwa ndị ahịa ya n'oge.
Afọ ole na ole gara aga, a na-eji ndị ahịa gburugburu ụwa enye ndị ahịa akpa rọba n'efu. Kinddị ojiji mkpofu akpa rọba ahụ siri ike idobe otu narị afọ ma kọwaa ya "mmetọ ọcha". N'ịhụnanya nke okike na akpa akpa, anyị guzobere ụlọ ọrụ "Zhihongda" iji nyefee akpa eco-friendly n'ahịa.
Aha ụlọ ọrụ anyị "Zhihongda" na-enwe olileanya na anyị nwere ike ịmekọrịta ezigbo obibi obibi, iji nweta ozi ụlọ ọrụ anyị.
Ndụ anyị na-ebi kwa ụbọchị na -emepụta mmetọ gburugburu ebe obibi. Ọ bụ ọrụ anyị bụ iji belata mmetọ gburugburu ebe obibi. Na ịmepụta na iwebata ngwaahịa ọhụrụ, anyị na-a attentiona ntị na okwu gburugburu. N'ime afọ ndị gara aga, anyị na-eche ọtụtụ ihe isi ike ihu ma na-ekele nkwado ndị ahịa anyị.
Pụtara nke akpa Eco
Emere akpa Eco-enyi na enyi iji mepụta, belata ma weghachite.
Nonwoven akpa: ke ofụri ofụri, otu akpa nwere ike iwerekwa ihe karịrị 100 ugboro.
Akpa Owu: ke ofụri ofụri, otu akpa nwere ike iwerekwa ihe karịrị 200 ugboro.
Kanvas Bag: ke ofụri ofụri, otu akpa nwere ike iwerekwa ihe karịrị 400 ugboro.
Akpa linen: ke ofụri ofụri, otu akpa nwere ike iwerekwa ihe karịrị 500 ugboro.
Naịlọn foldable akpa: ke ofụri ofụri, otu akpa nwere ike ịbụ ihe karịrị 300 ugboro.
Oké naịlọn akpa: ke ofụri ofụri, otu akpa nwere ike iwerekwa ihe karịrị 500 ugboro
Laminated Nonwoven akpa: ke ofụri ofụri, otu akpa nwere ike iwerekwa ihe karịrị 200 ugboro.
Laminated kpara Bag: ke ofụri ofụri, otu akpa nwere ike iwerekwa karịa 300 ugboro.
Ntekwasa Akwụkwọ Bag: ke ofụri ofụri, otu akpa nwere ike iwerekwa ihe karịrị ugboro 30.
Owu Akpa Canvas: 100% ihe okike, ọ nwere ike ịbụ ezigbo biodegradation mgbe mkpofu.
Akpa linen: 100% ihe okike, ọ nwere ike ịbụ ezigbo biodegradation mgbe mkpofu.
Kraft Akwụkwọ akpa: 100% ihe okike, ọ nwere ike ịbụ ezigbo biodegradation mgbe mkpofu.
Nonwoven akpa: Ihe na-adịghị egbu egbu na nke PP, ọ ga-emebi ihe dị ka ọnwa 3 mgbe mkpofu, ọ na-amalite na-eweda ala ma na-aghọ ntụ ma na-abanye n'ime okike mgbe ọnwa 12 gasịrị.
Laminated akpa: Ọ bụ ihe na-adịghị egbu egbu na nke PP, ọ ga-eweda ya ihe dị ka ọnwa 5 mgbe a kpochara ya, malite ịlaghachi ma ghọọ ntụ ntụ ma jikọta n'ime okike mgbe ọnwa 18 gachara.
Non-kpara akpa: 10% -30% nke ihe eji eme ihe sitere na ihe eji eme ihe PP. Enwere ike ighazigharị ya ọzọ ma ọ bụrụ na edozi ya nke ọma.
Kpara akpa: 20% -50% nke ihe eji eme ihe sitere na ihe eji eme ihe PP. Enwere ike ighazigharị ya ọzọ ma ọ bụrụ na edozi ya nke ọma.
PET akpa: 80% -100% nke ihe eji eme ihe sitere na karama plastic. Enwere ike ighazigharị ya ọzọ ma ọ bụrụ na edozi ya nke ọma.
AKW SKWỌ AKW FREEKWỌ AKW FREEKWỌ AH IN! Anyị na-atụ anya na ị ga-enweta ihe ị chọrọ, ihe nlele na mbipụta akwụkwọ. Biko kpọtụrụ ndị ọkachamara anyị ozugbo!